Proposals_XH_Iziphakamiso | PIVX
Nceda uvakashele enye yalezi ziza zoshishino ukuba ubone uluhlu lweziphakamiso zangoku kunye nezidlulileyo.
Ulwazi lwe-PIVX Masternode
Ukuba unengcamango ofuna ukuyibona ‘ufike ebomini’ kwaye idinga izibonelelo kunye nenkxaso engaphandle kwento ongayenza ngayo into yokuzivolontiya, ngoko ke ukuphakanyiswa koLuntu lwasePIVX kuyona ndlela eyona ndlela ibhetele yokwenza ukuba kwenzeke!
Sineenkqubo zokunceda ukubandakanya uluntu ukuqokelela ingxelo yabo ukuqinisekisa ukuba isiphakamiso sakho sinethuba elihle lokupasa, phambi kokuba livotelwe. Iinkcukacha ezongezelelweyo kwisiphakamiso se-yor, bhetele, kodwa entliziyweni yalo, isiphakamiso sisisitatimende kuwe esiphendula imibuzo emi-2 kwi-PIVX yoluntu; “Yintoni eya kusihlawula?” Kwaye “Yintoni eya kusithenga?”
Uninzi lwamanyathelo aboniswe apha ngezantsi lukhethiweyo, kodwa ukuba ulandele le nyathelo, ngokuqinisekileyo uza kuzinceda itoni yexesha.
ISINYATHELO 1: Xoxa ngeSlack.
Ukuba kuyimfuneko, fumana isimemo kwi-slack.pivx.org. Joyina iseshane esifanelekileyo, zizise, ​​uze uphonsa ingcamango yakho ngaphandle. Mhlawumbi omnye umntu sele esebenzela ingcamango efanayo, okanye sele ilingwe ngaphambili. Kulungile noko, mhlawumbi kukho abantu abaneengcamango zokongeza kwaye bafuna ukunceda! Ingxoxo kwi-Slack yindlela elula kakhulu yokusebenzisa amandla oLuntu olubanzi lwe-PIVX. Kuloo nto inomdla wonke umntu ukuba uyisebenzise loo nto!
ISIGABA 2: Kulungile. Abantu bathanda ingcamango yakho. Ngoku kuthweni?
Emva kokuba ucinga ukuba le ngcamango iyomelele, yizisa ingxoxo kwinqanaba elilandelayo kwi-forum.pivx.org kwi-Budget & Iziphakamiso zoLawulo -> Iingxoxo zengcebiso ngaphambi koPhulo.
Ngokwemvelo, umxholo kwiSlack awunamathele ukude. Inkqubo yengxoxo yesikhathi sangempela, kwaye imbali isuswe ngokukhawuleza. Iifom zibonelela ngekhaya elihlala lihlala lithe ngxubusho yakho. Abantu banokubona oko kwakubhalwe iintsuku ezidlulileyo, kwaye wongeza kule ngxelo ngeengcinga zabo. Xa lixesha lokuba abantu bavotele, abayi kukwazi ukuphonononga amazwana kwi-Slack. Baya kuhamba. Ngoko uzama ukuba neengxoxo eziphambili zihlala kwiifom.
ISINYATHELO 3: Ukuqonda ukubaluleka kwePPL.
I-PPL yiNqanaba lokuKhuthazwa kwePropati. Isikhokelo sokukunceda uqonde ukubaluleka kokuxoxa ngesiphakamiso sakho kwiindawo ezahlukeneyo ze-intanethi kunokwenzeka. Imidiya yoluntu, iifom ye-intanethi, ii-blogs njl. Kunzima ngokwakho isiluleko sakho, indawo ezininzi apho kufuneka ube nencoko kwaye ixesha elide lifanele libe lide.
Iingxoxo zinokukunceda kuphela. Ingxelo eyongezelelweyo oyifakayo kwisiphakamiso sakho, ithuba elihle lifanele liphumelele. Ufuna ukubonisa ukuba ‘uhlanganise zonke iisiseko’, kodwa unokwenza oko kuphela ngokungena kwi-Intelligence Swarm ukuze ufumane oko ulahlekileyo. Ungakhathazeki – izinto ezilahlekileyo zilindelwe! Ukwamkela iingcamango ezivela kwabanye, kwaye ukongeza kwabo kwisiphakamiso sakho, yindlela enkulu yokufumana inkxaso xa kufika ixesha lokucela iivoti!
Isiphumo sokugqibela siya kuba xa usithumela isiluleko, uya kuba nakho ukuchaza ixabiso le-PPL, eliza kunika abantu ixesha elixinekileyo lokuzithemba olubandakanyekileyo kuluntu, ukuze bakwazi ukuvota ngesiphakamiso sakho ngaphandle kwesidingo sokwenza Ngokwabo ukunyamekela. Uza kufumana amavoti amaninzi ngokugqiba le nyathelo, kwaye idumela lakho liyakwandisa. Ukongezelela, konke okufunekayo kukuqinisekisa i-whale 1 ukuba isiphakamiso sakho sifanelekile kwaye unokufumana amavoti amaninzi!
Ixwebhu le-PPL alisigqibe ngokupheleleyo okwamanje. Nangona kunjalo, kukho ividiyo echazayo ‘echaza’ eya kukukunceda ukuba uyayiqonda ngokulula kwaye ilandele injongo ekunyuseni ngokukhawuleza ukuba iziphakamiso zakho ziya kwamkelwa. Nceda ubukele ividiyo efutshane apha.
ISINYATHELO 4: Qedela isiphakamiso sakho.
Ngoku yisikhathi sokudala inguqu yokugqibela yesiphakamiso sakho kwaye uyongeze kwi-forum.pivx.org. Ngeli xesha, kwiforum kwi-Budget & Iingcebiso zoLawulo. Qaphela ukuba lo nguxwebhu oluza kuboniswa kwisiphakamiso esisithunyelwe ngokusemthethweni, ngoko qiniseka ukuba uyifumene!
Silindele ukuba neePlato zePropati zifumaneke kungekudala. Ngexesha elithethayo, nceda ulandele nje ifomathi yabanye abathumele.
I-STEP 5: Unayo ixesha elaneleyo?
Iziphakamiso zokumiselwa ‘zitywiliswe’ iiyure ezingama-72 phambi kokulandelayo ‘Super Block’ ezenzekayo nganye iintsuku ezingama-30. Ngokuxhomekeke kwisicwangciso sakho, unokufuna ukuhambisa isicelo sakho ngokukhawuleza ukuba ufumane ezinye iimali ezingacetywanga okwamanje. Ngokuqhelekileyo, ufuna nje ixesha elininzi ngangokunokwenzeka ukuze uthole amavoti amaninzi ngangokunokwenzeka!
Ukuze ufumane apho ikhoyo ikhoyo khona, vula isikhwama sakho, kwaye uye kwi ‘Tools -> Debug Console’ kwaye faka: ‘mnbudget nextblock’ (ngaphandle kweengcaphuno).
Emva koko thabatha i-4,320 ukusuka kuloo nombolo (ii-72 hrs) ukufumana umhla wokugqibela xa iziphakamiso zichithwe.
Ngoku uye kwi ‘Izixhobo -> Ulwazi’ ukuze uthole ‘Inombolo yamanje yeebhloko.’
Ngoko sinako; I-Block elandelayo – 4,320 – Iibhloko zangoku = Iibhloko ukususela ngoku ukuya kumhla wokugqibela.
Umzekelo; 648,000 – 4,320 – 625,332 = 18,348 iibhloko ukuya kumhla wokugqibela.
Ukususela kwibloko = 1 iminithi, i-305.8 hrs ukususela ngoku (ngoMeyi 2, 2017 ngo-3:13 PM EST) okanye ngoMeyi-15 ngo-9: 00 AM malunga nezinto ezigqityiweyo ezingama-72 emva kwexesha.
Ngoku ngoku sikunyanzele ukuba ufunde yonke loo nto, ukuba ufuna ukuthatha indlela elula, khangela nje ishedyuli e-“Super Blocks Schedule” apha.
ISINYATHELO 6: Hambisa i-Proposal kwi-Blockchain.
Qaphela ukuba kukho iifizi ezi-2 ezibandakanyekayo ngokuhambisa isiphakamiso. Kuyamkeleka ngokufanelekileyo ukuquka ukubuyiswa kwezi ntlawulo njengenxalenye yemali oyicelayo.
Imali yokuqala yintlawulo ye-‘Proposal Submission ‘ye-50 ye-PIV kwaye ihlawulwa kungakhathaliseki ukuba isiluleko sakho samkelwe okanye samkelwa. Ewe, ukuba isiphakamiso sakho sinqatshelwe, awuyi kuhlawulwa kwakhona. Esinye isizathu sokulandela onke amanqanaba angentla apha!
Intlawulo yesibini yi-‘Proposal Activation Fee ‘ye-50 ye-PIV ehlawulelwa kumthuthukisi ukuze isebenze isiluleko sakho esamkelekileyo. Oku akukona kumthuthukisi ngokwayo. Uya kuhlawula loo mali kumthuthukisi, kwaye unononkcenkcesha uya kuyifaka kwinkqubo. Le ntlawulo ihlawulwa kuphela xa isicelo sakho samkelwe, kwaye ucinga ukuba ucele ukubuyiselwa kwisiphakamiso, uya kubuyiselwa yona.
Amanyathelo okuhambisa ngokusemthethweni isicelo sakho achazwe kwiimigaqo apha. Nceda ukhululeke ukucela uncedo ukuwugqiba. Isiteshi se-Slack # Suspport ibhetele yakho engcono.
ISIGABA 7: Musa ukuyeka ngoku!
Wonke umntu uxakeke. Kulula kakhulu ukufumana uhlangothi olulandelekileyo kwaye ulibale. Ngoko, ngoku lixesha lokubuyela kulowo nalowo kwiindawo ze-intanethi kunye neendawo zokuzonwabisa ezentlalo, apho uxoxisana nesiphakamiso sakho kwaye wonk ‘ubani uyazi ukuba i ngeniswe kwaye ilungele ukuba ivoti! Qinisekisa ukuba uqhubeke nokubeka esweni zonke ezo ziteshi, kuba ngoku ukuba abantu banomnwe kwiqhosha lokuvota, ufuna ukuba uphendule yonke impendulo yomzuzu wokugqibela!
ISINYATHELO 8: Indlela yokuvota.
Xa ukhumbuza abantu isiphakamiso sakho silungele ukuba bavote – nceda baxele kule nto ‘Indlela yokuvota’ postile. I-PIVX intsha kubantu abaninzi kwaye abaninzi babo abavotanga ngaphambili. Emva kokuba wenze oko kanye, kulula ukwenza. Kodwa ngaphandle kokuncedisa, abantu abaninzi abafuna ukuvota ngesiphakamiso sakho bangakubeka eceleni ukwenza emva koko – kwaye ungabuyeli kuwo. Ngoko, nikela ukubanceda bavote!
O-kwaye ungakhohlwa ukuvota kwisiphakamiso sakho ukuba unako!
ISINYATHELO 9: Jonga uluhlu lweziphakamiso.
Ufuna ukubona isiphakamiso sakho kunye nabanye? Ungadinga ukulinda imizuzu embalwa ukuba ibe ngabantu, iireyari zizinto ezincinci.
ISINYATHELO 10: Lindela ukuvota ukugqiba.
Ukuba ukwenzile konke oku ngentla, kwaye ufumene umncinci ‘ukuchasana’ kwisiphakamiso sakho, ngoko unokulindela ukuba uyamkeleka. Kodwa, nokuba iziphakamiso ezintle ziyakwazi ‘ukugqitywa’ xa kukho ezinye ezininzi iziphakamiso ezinkulu zokulwa nemali engancinci. Ngoko, qhubeka usebenza kanzima ukuqinisekisa ukuba yonke imibuzo yombuzo iphendulwa njalo njll ukuze ufumane loovoti!
Siyabonga ngokuhambisa isiluleko sakho kunye negalelo kwinkqubo yoLawulo lwe-PIVX.